3 Sababood Oo Kireysa Shirkad PR | | Martech Zone
3 Sababood oo Loo kireysto Shirkad PR ah
Isniintii, September 21, 2009 Arbacada, Janaayo 29, 2014 Chris Lucas
Doorkayga atQalabaynta , ah dhismaha foomka internetka, mid ka mid ah shaqooyinkeygu waa in aan ka faa'iideysto xiriirka dadweynaha (PR) iyo gaar ahaan wararka warbaahinta, taas oo horseedda soo-gaadhista iyo iibka iibka.
Aniga oo khibrad u leh hay'adda iyo dhinaca macmiilka labadaba waan fahamsanahay waxa a shirkadda Xiriirka Dadweynaha wuxuu u qaban karaa urur. Halkan waxaa ah seddex sababood, oo laga soo qaatay waayo-aragnimadayda, sababta ganacsiyada, iyo gaar ahaan ganacsiyada yaryar, ay u kireystaan ​​hay'ad ka baxsan PR.
Waqti uma lihid inaad sameyso PR: PR maahan spigot aad daaran karto oo dami karto. Sida shaqooyinka kale ee suuqgeynta, iswaafaqsan, istiraatiiji ah, iyo qiyaasta PR waa wax loo baahan yahay in loo qorsheeyo loona fuliyo muddo dheer. Sida aadan udaarin karin SEO, PR waa wax un xoogeysanaya markaad dadaal dheeri ah galiso.
Si Aad U Weyn Ugu Qaadato Daahfurka: Ganacsiyada badankood waxay fahansan yihiin sida ay muhiimka ugu tahay soo saarista wax soo saar ama adeeg cusub guusha ganacsigaaga. PR aad buu uga badan yahay qoritaanka war-saxaafadeedka oo ku dheji adeegga siligga. Haysashada lammaane sare u qaadi kara xiriirka warbaahinta, warbaahinta bulshada, dhacdooyinka, fursadaha abaalmarinta iyo howlaha kale ee la xiriira PR oo ay weheliso sii deyn weyn ayaa ku siin karta lug sidii aad u bilaabi lahayd badeecadaada. Laakiin kaliya xusuusnow, sidaan ku sheegay qodobka 1. PR maahan wax la shido oo la damiyo.Haddii aad qorsheyneyso inaad u isticmaasho hay'ad dibedda ah bilowgaaga waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad haysato nidaam meesha ka jira marka daahfurka la soo gabagabeeyo. sii wad tamarta oo dhan iyo xawaaraha aad dhistay. Waxa ugu xun ee shirkad ay sameyn karto waa soo saarista wax soo saar weyn, PR weyn, oo sii libdhi iyadoo aan la kordhinin waxa adiga iyo hay'addaadu bilooyin ku soo qaadatay horumarinta.
Si Loo Cusboonaysiiyo Badeecad ama Adeeg: Mararka qaarkood xitaa kuwa ugu wanaagsan guriga dhexdiisa mareennada PR way ka dhammaan karaan fikradaha wanaagsan. Sida dib-u-sameynta ama websaydhka dib-u-habeynta keenaya hay'ad dibedda ah si loo soo nooleeyo barnaamijkaaga PR waxay bixin kartaa faa'iidooyin badan. Wakaaladaha wanaagsan ee PR waxay yaqaanaan sida loo eego sheyga, adeegga, ama shirkadda oo ay u arkaan wax cusub - wax buzz u qalma. Wax aad u maleynaysid inuu dhintay ama daalay ayaa si dhaqso ah loogu qaadi karaa suuq cusub ama wado cusub isla markaana dhaqso ayaa lugaha loogu heli karaa. Adeegsiga shirkad PR ah oo si dhakhso leh u wici karta xiriiriyaashooda isla markaana tijaabin karta fikradaha cusub waxay soo saari kartaa nolol badeecad duug ah ama ganacsi ah. Xusuusnow in kastoo, xitaa PR-ga ugufiican uusan soo nooleyn karin shey dhimanaya, hubi inay wax jiraan halkaasna daacad ugu noqo wakaaladaada guulihii hore iyo guuldarooyinka si ay ubixiyaan istiraatiijiyad sax ah.
Iyo gunno ahaan halkan waa hal sabab dheeraad ah oo loo kireysto hay'ad ka baxsan.
4. Waxaad Ku Jirtaa Suuqa Camiran: Ganacsiyada yar yar ee isku dayaya inay ku tartamaan suuqyo waaweyn, dhisan, ama dad badan ayaa laga yaabaa inay u arkaan faa iidooyin wanaagsan qaar ka mid ah shaqaalaynta hay'ad ka baxsan PR. Hay'ad wanaagsan waxay awoodi doontaa inay horumariso istiraatiijiyad taas wuxuu diirada saaraa awooda shirkadaada iyo kala duwanaanshaha kaa dhigaya inaad istaagto. Marar badan wakaaladdu waxay kaa caawin kartaa inaad jebiso buuqa oo aad dhakhso u gaarto suuq aad rabto.
Kuwaani maahan sababaha kaliya ee ay hay'ad u shaqaaleyneyso wakaaladda PR laakiin kuwani waa sababo aan ka arkay macmiil iyo hey'ad si aan u kireysto meel ka baxsan caawinta PR.
Tags: blastmediaprxiriirka dadweynaha
Suuqa Hore iyo Suuqa Cusub. Waa adiga
Sep 22, 2009 at 2: 20 AM
Shirkadaha PR waa wax yaab leh. Laakiin xaqiiqdi waa inaad fahamtaa PR kahor intaadan baacsanin kooxahan.
Fiiri qodobkan: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Oo daawo muuqaalkan cajiibka ah:
Sep 22, 2009 at 12: 27 PM
Dhamaan qodobada wanaagsan. Inta badan ganacsiyada yaryar ma haystaan ​​lacag ay ku sameeyaan tan. Laakiin sida aad kor ku leedahay,
dadaalladu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo isdaba-joog ah, istiraatiijiyad leh, lana qiyaasi karo.
Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay xayeysiinta. Waxaan arkaa ganacsiyada yaryar oo dhowr jeer sameeya oo ka cabanaya in xayeysiintu aysan shaqeynayn.
Haddii ganacsigu doorto inuu sameeyo kaligiis, furaha ma aha inuu xiro spigot-ka. Sida aad u nadiifiso roogaaga maalin kasta, u xoq waddooyinka hortiisa dukaankaaga, tani waa wax u baahan taxaddar joogto ah.
Oktoobar 28, 2009 at 2:33 AM
Runtii waa lacagta ugu fiican ee aad ku qarashgareyn karto si aad dhab ugu hesho iibkaaga. Waad ka boodi kartaa hareeraha ka dib fursadaha markasta, laakiin guud ahaan ma lihid miisaaniyad aad ku daboosho dhammaantood si wax ku ool ah. Raadi durdurradaada oo raadi talada saxda ah oo ka dhis halkaas. Maqaal wanaagsan
Shirkadda Chicago PR
20, 2011 at 12: 44 PM
Waxaad halkan kuheysaa qodobo aad u wanaagsan - boosteejo weyn!
Jan 10, 2012 at 8: 13 AM
Waxaan u maleynayaa inaan ku raaci karo dhamaan Chris. Sababta kale ayaa ah in lagu dhaho, 'maya' markaad fikrad xun haysato. Haddii aad tahay hay'ad PR farsamo ahaan ku filan madaxbanaan waxay awood u leedahay inay tiraahdo markay u maleyneyso in fikradaada midkood aysan shaqeyn doonin waana inay noqotaa geesinimo inay kuu sheegto.
Waxaan u maleynayaa inay tahay iyada oo aan la dhihin waa inay noqdaan hal abuur ku filan inay la yimaadaan figrado iyaga laftooda sidoo kale!
Oktoobar 5, 2017 at 2:23 PM
Waa wax xiiso leh in la barto in markay tahay ganacsi doonaya inuu shaqaaleeyo shirkad xiriirka dadweynaha inay jiraan faa'iidooyin ka iman kara iyaga oo adeegsanaya mid. Waan jeclahay sida aad u sheegtey inay taasi ka caawin doonto inay sare u qaadaan bilawga ganacsigooda ama wax soo saar kasta oo cusub oo ay doonayaan inay iibiyaan. Tani waa wax ay tahay inay maanka ku hayaan si ay awood ugu helaan inay xoogaa la shaqeeyaan warbaahinta noocyadeeda kala duwan.